Bixinta Maamulaha Muuqaalka ee BricsCAD - Geofumadas
Janaayo, 2015 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, aragti ugu horeysay
Nooca ugu horreeya ee ganacsiga (iyo qaybta tijaabada ah ee lacag la'aanta ah ee "Spatial Manager ™") ee BricsCAD ayaa hadda la heli karaa si loo soo dejiyo oo loo iibsado. Luuqadaha ku jira codsigaan waa Ingiriisi iyo Isbanish, waqtigaas.
Tani codsiga Bricscad dhashay sida qalab cusub oo loogu talagalay dadka isticmaala oo u baahan in ay soo dhoofsadaan BricsCAD xogta geospatial sida hay'adaha BricsCAD aan laga badinin warbixin ka soo loox xogta aad, oo ka mid ah dad badan oo maqan ilaa iyo haatan in fursadaha BricsCAD.
Soo-keenista xogta laga helo faylasha, xogta macluumaadka, iyo dukaamada geospatial sida shirkadaha DWG ee sawirada BricsCAD.
Isbedelka joometeriga u dhexeeya nidaamyada isuduwidda.
Akhri jadwalada xogta sida BricsCAD Data Extended Data. Waxaa ku jira EEDs daaweeye.
Dhamaan shaqooyinka waxaa lagu soo ururiyey palette maamuli karo ee BricsCAD.
Maamulaha Meel-marinta Maareynta Muuqaalka
Codsiga waxaa lagu heli karaa laba qaybood, Standard iyo Basic, oo bixiya xiriirka ugu wanaagsan ee u dhaxeeya sifooyinka iyo qiimaha sida ku xidhan baahida qof kasta. Intaa waxaa dheer, waxaa suurtagal ah in la soo qaado version tijaabo oo bilaash ah oo u shaqeynaya maalmaha 30 laga bilaabo taariikhda rakibidda oo waxay kuu ogolaaneysaa inaad isku daydo mid ka mid ah laba qaybood.
si toos ah Keenista xogta aan ollogga ka BricsCAD: files xogta aan ollogga (SHP, GPX, KML, dhibcood galaya, MIF / bartamihii, tab, E00, SQLite, ASCII, iwm), database ama bakhaarka xogta aan ollogga (Server SQL Muuqaalka, PostGIS, WFS, iwm.) Iyo xirmooyinka ODBC ee dhibcaha ama WKB (Excel, Access, dBase, iwm)
Shirkadaha waxaa laga dhoofin karaa sawir cusub ama sawirro furan.
Xulashada lakabka lagu hayo halkaasoo shirkadaha la soo dhoofin doono ama isticmaali doona qiimaha garoonka si loo qeexo lakabyada kala duwan ee loo socdo.
Isbeddelka joometeriga oo isticmaalaya nidaamyada isuduwid ee aad jeceshahay.
Macluumaadka soo dejiya ka soo jadwalka sida macluumaadka loo yaqaan Extended Entity Data (EED).
Muuqaal bandhig shaashad ah (EED).
Nidaaminta ee soo dejinta hay'adaha ama hagaajinta garaafka iyadoo la isticmaalayo blocks, buuxinta, centroids iyo wixii ka badan.
Maareynta miisaankaaga iyo ilaha xogta ee dadka isticmaala.
Guryaha hantida ilaha xogta.
Wuxuu ka shaqeeyaa BricsCAD Windows, Pro ama Platinum.
Waxay isticmaashaa bixiyeyaasha xogta u gaarka ah.
Iyadoo loo marayo isticmaalka palette qudha Si loo xoojiyo dhammaan howlaha codsiga, maamulkoodu wuxuu la mid yahay kuwa kale ee BricsCAD. Palette sidan ayaad adigu u habeyn kartaa ilaha xogta, bilaabi hababka soo dejinta ee hay'adaha garaafyada iyo xogta alphanumeric iyo u muujiyaan shaashadda, sababtoo ah Si toos ah ugu beddel EEDs (Xogta La Wareegay) marka la soo dhoofiyo.
Daaqadda "Soo dejiso" ayaa ku siineysa suuragalnimada inaad isku dheellitirto xuduudaha ugu muhiimsan ee habka soo dejinta: sida qaybaha laga soo dejin doono layers kala duwan, waa maxay noocyada shirkadaha loo isticmaali doono kiis kasta, ikhtiyaarka ah buuxi garaannada la soo dejiyo adigoo isticmaalaya shading, ikhtiyaarka ah ku dar midabado kala duwan si lakabyo cusub loo abuuro, IWM
Hoos waxaad ka heli kartaa fiidiyo gaaban oo ku tusaya qaar ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee qalabkan soo jiidashada leh:
Waxaad ka iibsan kartaa ruqsadaha ganacsiga ee arjiga adoo adeegsanaya bogga qiimaha ee bogga internetka ee Maaraynta Muuqaalka:
Maamulaha Muuqaalka Qalabka Muuqaalka
Waxaan sidoo kale ku muujineynaa cinwaano kale oo laga yaabo inay xiiseyn karaan haddii aad go'aansato inaad tijaabiso Maahmaahda Muuqaalka ee BricsCAD:
Maamulaha Muuqaalka ™ for BricsCAD bogga wax soo saarka
Maamulaha Muuqaalka ee BricsCAD Wiki
Post Previous«Previous Nidaamka Macluumaadka Juqraafi: videos 30
Post Next Hel sax submeter ka iPad / iPhone ahNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Muujinta Maamulaha Mabda'a ee BricsCAD"
Peter56 isagu wuxuu leeyahay:
waxay u arkaan Dank für diesen Beitrag. Anscheinend ist er schon etwas älter. Mittlerweile hat sich nämlich eine Menge getan, Vor allem gibt es für BricsCAD (und auch AutoCAD iyo ZWCAD) Viele Neuerungen. Vor allem eine «Nooca Xirfadlaha ah». Damit können Geodaten auch exportiert werden. Auch HIntergrundkarten (ZB OSM, Bing- iyo Google Maps sowie WMS Dienste) können dynamisch angezeigt werden.